Mayotte Tourism inosvitsa Vanilla Islands Chiitiko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Mayotte Tourism inosvitsa Vanilla Islands Chiitiko
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Mayotte Breaking Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Iwo Vanilla Islands zviwi zvitsuwa zviri muIndian Ocean izvo zvasarudza kutora danho kusimudzira kushanya.
Kunyangwe rakawanda rebasa riri pakati pemusika wechikepe, zvinoramba zvakakosha kuti utaridze mukurumbira wezvitsuwa. Izvo zvirinani uye zvakanyanya kuziva zviwi zviripo, huwandu hwevashanyi huchawedzera.
Nekudaro, chimwe nechimwe chezvitsuwa chakagadzira chiitiko icho chainokoka vanobatana navo veboka, kuti vashande senheyo yeiyi pesheni yezano.
Mushure meSeychelles Carnival, iyo Madagascar Tourism Fair, iyo Kreol Mutambo muMauritius, iyo Métis Rusununguko Mutambo paReunion Island uye neComoros Heritage uye Tsika Yemutambo, iko kutenderera iko zvino kwapera neMayotte Lagoon Festival.
Yakavhurwa iri Chishanu 19 Chikunguru neMutungamiriri uye Mutungamiriri weDhipatimendi Kanzuru, Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, zvakare Mutungamiriri weVanilla Islands, uyu mutambo wekutanga unoisa dziva iri munzvimbo inoonekera.
Chinangwa chechiitiko ichi ndechekusimudzira Mayotte, hupfumi hwayo hwetsika uye hwepanyama uye sechikamu cheiyo purojekiti kuti dziva rinyorwe senzvimbo yeUNESCO World Heritage.
Sekureva kwaPascal VIROLEAU, director weVanilla Islands, "mutambo uyu mukana wekugovana nekuwana wakakomberedza dingindira regungwa. Ichi chinhu chakakosha chevashanyi kuMayotte chinofanirwa kushandiswa kusimbisa mukurumbira wechitsuwa ichi.
Sekureva kwaSoibahadine IBRAHIM RAMADANI, "Mayotte akabvuma zvizere chirongwa cheVanilla Islands. Iri kuita nhanho huru mukusimudzira kwehupfumi pamwe nekushanya ”.